“Labadiinnaba waa la idin waayayaa!” – Ruushka oo weerar nukliyeer ugu goodiyey 2 dal oo Yurub ah + Sababta | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka “Labadiinnaba waa la idin waayayaa!” – Ruushka oo weerar nukliyeer ugu goodiyey...
“Labadiinnaba waa la idin waayayaa!” – Ruushka oo weerar nukliyeer ugu goodiyey 2 dal oo Yurub ah + Sababta
(Hadalsame) 14 Juun 2022 – Fikradda ah in hubka nukliyeerka ah la geeyo Ukraine tiiyoo uu socdo iskahorimaadka u dhexeeya Kiev iyo Moscow waxay la macno tahay bilow “dagaal nukliyeer ah oo ka dhaca bartamaha Yurub” waana mid waalli ah, ayuu yiri Afhayeenka Aqalka Sare ee Duma, Vyacheslav Volodin.
Sarkaalku wuxuu ka jawaabayey hadalka Radoslaw Sikorski, oo ah xubin ka tirsan Xildhibaannada Polish-ka ah ee EU, horena u ahaa Wasiirkii Arrimaha Dibadda Poland, kaas oo sheegay in reer Galbeedku ay “xaq u leeyihiin” inay sidaas sameeyaan.
“Xildhibaannadan oo kale inta ay haystaan, reer Yurub waxay la kulmi doonaan dhibaatooyin aad uga khatar badan kuwii haatanba haystey – sida qaxootiga, sicir-bararka rikoor jebiska ah, dhibaatooyinka tamarta iwm,” ayuu yiri Volodin oo war soo dhigay warbaahinta bulshada.
“Sikorski ayaa hurinaya colaad nukliyeer oo ka qaacda bartamaha Yurub. Kama se fikirayo mustaqbalka Ukraine iyo xitaa Poland midkoodna. Haddii hindiseyaashiisu ay hirgalaanna, waddamadani way baaba’ayaan, iyaga oo ay wehliyaan Yurub oo dhan.” Ayuu ku gooddiyey Volodin.
Volodin waxa kale oo uu su’aal ka keenay caafimaadka dhimirka diblomaasigan Polish-ka ah, isaga oo soo jeediyey inuu “baaro dhakhtarka dhakhtarka dhimirku,” islamarkaana uu iska dhiibo waajibaadkiisa MEP, oo uu gurigiisa joogo si halkaa loogu “ilaaliyo” hadda wixii ka dambeeya.
Previous articleTurkiga oo mar kale war kasoo saaray halka uu ka taagan yahay ku biirista NATO ee Finland & Sweden
Next articleWarkii ugu dambeeyey ee qaxootigii joogey UK ee loo qaadi lahaa Rwanda